အောင်မလေး.. ဘုရားသခင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အောင်မလေး.. ဘုရားသခင်
Posted by kai on May 16, 2011 in Editor's Notes, Think Tank |6comments
အောက်ကသတင်းဆောင်းပါးလေးသေသေချာချာ ဖတ်ကြပါ..။ ဟိုတလောကပဲ..ကျုပ်က ဒီမှာ ပြောဖြစ်သေးတယ်.. ။ ဘုရားသခင်ကို မိခင်သဘာဝတရားနဲ့နှိုင်းပြီးတော့…။
အခု… ဟော့ကင်းလည်း ပုံစံတမျိုးနဲ့ ပြောလာတယ်..။ “What could define God [isaconception of divinity] as the embodiment of the laws of nature. တဲ့..။ ဆိုတော့… နောက်ဘ၀ ဆိုတာလည်း… ဘာတဲ့.. fairy story တဲ့..။
ဟောဗျာ ဘာကိုဘယ်လို နားလည်ရမှာလဲ…..။
Facebook ပေါ်မှာ လည်း ဒီ topic ကို တွေ့ လိုက် တယ် ။Stephen Hawking ရဲ့အဆို က ဖန်ဆင်းရှင် မရှိ ( Big Bang Theory) ကောင်း ကင်ဘုံမရှိ နောင်ဘဝဆိုဒါမရှိ ဒါ ပေမဲ့ extraterrestrial life တော့ ရှိ နိုင် တယ် ။ ဟုတ် ?? မဟုတ်ရင် လည်း ပြောပြပါ ။ သူ က atheist ဆိုတော့ ဒီ လို ဆို တာ မအံ့ဩ ပါ ဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ရှိ alien life ရှိ နိုင်တယ် ဆိုတာက တော့ ……… အင်း ဉဏ်မမှီ သေး လို့ လား မသိ ဘူး ။
အပေါ်က ..ဘာသာပြန်သတင်းနဲ့ တွဲဖတ်သင့်တယ်…။
သူ့ကို… ဆဲစာတွေမှ.. အင်တာနက်မှာ ပလူကိုပျံနေတာပဲ…။
His ex-wife, Jane said during their divorce proceedings that he was an atheist. Hawking has stated that he is “not religious in the normal sense” and he believes that “the universe is governed by the laws of science. The laws may have been decreed by God, but God does not intervene to break the laws.” Hawking compared religion and science in 2010, saying: “There isafundamental difference between religion, which is based on authority [imposed dogma, faith], [as opposed to] science, which is based on observation and reason. Science will win because it works.”
In an interview published in The Guardian newspaper, Hawkings rejected the concept of Heaven asamyth and told that ‘Heaven and afterlife is fairy story for people afraid of the dark’.
It is really terrific!
That is what I feel but I can still sense what it is inside his heart.
Science does work actually, but there isalittle doubt why Buddha did not proceed any further for observing universe …
ှုအင်း….ကိုခိုင်ရေ…ဘာသာရေးဆွေးနွေးပွဲများ ရပ်နားသင့်ပီလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်မြင်လို့မဟုပ်ပါ။
art pine says: